Fikradda Nooca - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
- Fikradda nooca -
Qiimaha tikniyoolajiyadda horumarsan waxay kujirtaa ficil ahaan iyo adeegsi. Daaweynta takhasuska leh, warshadaha laxiriira iyo dalabaadka waa kuwo iskuxirma oo kaladuwan, iyo arjiga tikniyoolajiyaddu wuxuu leeyahay calaamado ballaadhan oo calaamadeysan. Kaliya kaliya fahamka qotada dheer ee caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan macaamiisheena, waxaan door weyn ka ciyaartaa isla markaana u abuurtaa qiimo weyn macaamilkeenna hooyada halista ah
AKF waxaa ka go'an inay codsato tiknoolajiyada ugu horumarsan uguna bisil-
nology si dabacsan si loo xaliyo dhibaatooyinka macaamiisha iyo kor u qaadista isdhexgalka daaweynta iyo daaweynta caafimaadka. Diyaar uma nihin inaan bilowno
teknolojiyada, laakiin ugu horreyntii, waxaan si qoto dheer u fahamsanahay shuruudaha macaamiisha, waxaanna ku dadaalaynaa inaan helno xalka dhabta ah ee wax ku oolka ah ee isu keenaya baahida jirta iyo tan mustaqbalka, oo leh dabacsanaan horumarineed.
AKF wuxuu sii wadaa inuu kordhiyo maalgashiga R & D, had iyo jeer si wanaagsan ayuu u bartaa iyo tiknoolajiyada hoggaamineysa, iyo xirfaddeeda
kooxda dhagaysigasi sax ah dhexgal khayraadka kala duwan, kuna dabaqo hal-abuurnimada sida loogu baahan yahay, bixijoogto ah
adeegyada dabagalka, iyo si dhakhso leh ka jawaab dhibaatada macaamiishalems, isla markaana ay ku wada koraan macaamiisha.
Baahida macaamilku waa xoogga dhaqaajiya maskaxdeenna, waxaannu u hoggaansamaynaa macaamil-dhexe, si dhakhso lehjawaabta baahida macaamiisha, iyo siinta adeegyo tayo sare leh macaamiisha.
DAACADNIMO iyo AAMINO
Si dhakhso leh looma odhan. Daacadnimadu waa shay aan la taaban karin oo shirkad ah.
Waxaan had iyo jeer ku guuleysanaa macaamiil badan oo daacad ah oo leh daacadnimo.
Horseed iyo maal
Haddii aynaan la jaanqaadi karin waqtiyada isbeddelaya, shirkadaha waaweyn ayaa istaagi doona. Cusbooneysiinta, fikirka cusub ee hormarinta, habab cusub iyo guulo cusub ayaa ka dhigaya marwalba Hore u socod
TAYO SHARCI AH
Waxaan si adag u hirgelineynaa nidaamka maareynta-tayada tayada QMS, waxaanna dammaanad ka qaadnaa tayada prod-cts iyada oo loo marayo maalgashiga R & D, soosaarid adag, heerar adag oo tayo leh, adkeyn iyo xaqiijin.
Wadashaqaynta kooxdu waa tartan. Kooxda ayaa kaliya loo dhisay iyadoo lagu saleynayo is-dhammaystirka iyo iskaashiga labada dhinac, waaxyaduna way wada shaqeeyaan, saldhigna u yihiin xaaladdan, waxtarka shirkadda iyo sinnaanteeda waa la horumarin karaa.